Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.4 xeelado Research
Marka la eego tobankan sifooyinka ilaha xogta weyn iyo xadeynta soo jireenka ah ee xogta xataa si fiican u arkay, nooca xeelado cilmi muhiim tahay? Taasi waa, sida aan u baran karaan marka aan ma ku weydiin su'aalo iyo ha cararin tijaabo? Waxay u muuqdaan kuwo laga yaabo in dadka kaliya daawashada ma keeni karta in cilmi-baaris oo xiiso leh, laakiin kiiska ma ahan.
Waxaan arkaya saddex xeeladaha ugu weyn ee waxbarashada ka data dheehidda: wax tirinta, wax saadaalinta, iyo Qiyaasidda tijaabo. Waxa aan ku qeexi doonaa mid kasta oo ka mid ah waji-kaas oo lagu magacaabi karaa "xeelado cilmi" ama "cuntada cilmi" anoo iyaga muujinaya doonaa la tusaalooyin. Xeeladahan mana yihiin kuwo isku xidhan ama dhamaystiran, laakiin waxay ku sameeyaan qabsadaan badan oo cilmi leh xogta dheehidda.
Si foreshadow sheegashooyinka ah in ay raacaan, tirinta wax waa waxa ugu muhiimsan marka aynu u mareysa xukumidda dhexeeya saadaasha ka aragtiyaha kala duwan. Saadaalin, iyo gaar ahaan nowcasting, waxay noqon kartaa mid waxtar u leh siyaasad-dejiyeyaasha. Ugu dambeyntii, xogta weyn kordhisaa awoodda aan u leenahay in la sameeyo qiyaas sababaha ka data dheehidda.